Malunga nathi - Liaocheng Kunmei Ukunikela Co., Ltd.
Liaocheng Kunmei Ukunikela Co., Ltd.ise-Linqing City, kwiPhondo Shandong, nto leyo eye "Hometown Bearings e China". Umzi mveliso wokuvelisa uphuhlisiwe apha kwaye izinto zokusebenza ziyakhawuleza. Yasekwa ngonyaka ka-2001, inkampani ngumvelisi othweleyo odibanisa i-R & D, uyilo, imveliso kunye nentengiso.
Inkampani ineendlela zemveliso ezenzekelayo eziphambili kunye nezixhobo zovavanyo. Kukho abasebenzi abaqeqeshiweyo be-R & D kunye neqela lemveliso enezakhono. Sebenzisa ubuchwepheshe obuphambili. Veza umgangatho ophezulu kunye nokuchaneka okuphezulu kweebheringi zebhola emqengqeleki, iibhloko zomqamelo ezithweleyo, iibheringi ezinamathele kunye neebheringi ezijikelezayo ngokungqinelana nemigangatho yesizwe. Izixhobo zovavanyo ezihambele phambili kunye novavanyo olunobunkunkqele, uvavanyo kabini kuthetha ukuqinisekisa umgangatho weseti nganye yeemveliso, iimveliso zithengisa kakuhle e-China kwaye zithunyelwa eYurophu nase-United States nase-Russia, eMalaysia, eSingapore, e-India, njl.namazwe kunye nemimandla. Kunconywa uninzi lwabathengi.
Kwangaxeshanye, le nkampani ikwasasaza iibheringi ezithandwayo zabavelisi abakhulu eSweden, eJamani, eUnited States, eJapan nakwamanye amazwe. Inkampani inamandla aqinileyo, iintlobo ezipheleleyo kunye neemodeli, kunye ne-inventory eyaneleyo. Unikezelo lufike ngexesha kwaye luyafumaneka kubathengi ngexabiso elifanelekileyo.
Iimveliso zokuthwala i-KM zisetyenziswa kakhulu koomatshini bezolimo, iimoto, oomatshini bomoya, isinyithi, imigodi, ipetroleum, imichiza, amalahle, isamente, iphepha, oomatshini abanzima kunye namanye amashishini.
"Ukuqwalaselwa kweenkcukacha, ukufuna ukugqwesa" yifilosofi yethu. Imizamo yethu mayingqamane nehlabathi. Ukuphumelela kunye nabathengi.
yenza iimveliso ezisemgangathweni, inkonzo yentliziyo iphela, wenze izibonelelo
ubunye, ukunyaniseka, ubuhlobo, ukukhuthala, amashishini
Sinda ngokholo olulungileyo, ukhule ngomgangatho
Liaocheng Kunmei Ukunikela Co., Ltd.
Eyona ndawo iphambili yeshishini
Ihowuliseyili nevenkile zeebheringi kunye nezinto zokusebenza, ioyile yokuthambisa, iimoto zekhompyutha kunye neemveliso zerabha
Imveliso ekumgangatho ophezulu
Amava emveliso yobuchwephesha, amandla angqina uphawu.
Velisa iimveliso ezisemgangathweni kwaye unikezele ngeyona nkonzo intle.
Inkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa
Nika abathengi ngokulula ngakumbi iinkonzo.